Golden Chief | Ohere mepere Free Daashi £ 5 | Cha cha UK Online cha cha
Golden Chief bụ a oghere na-arụ ọrụ na Scientific Games n'elu ikpo okwu na 5 esi anwụde, 4 ahịrị na a ọnụ ọgụgụ nke paylines sitere na site 10 ka 100. Nke a oghere na-adọrọ ya n'ike mmụọ nsọ si Native America na ọ bụ a kee ihe onye na uru nke Ohere mepere Free Daashi £ 5. Nke a cha cha ịgba chaa chaa egwuregwu nwere ike e nyere a na-agbalị mgbe ọ bụla nke Scientific Games online cha cha saịtị.
Ebe ahụ nzo Na a n'etinye Free Daashi £ 5 Game
Nke a n'etinye Free Daashi £ 5 nwere a ịkụ nzọ nso mgbanwe site na 10p ka £ 500 ọ bụla atụ ogho. Ebre kaadị na-anọchi anya ndị nnọchianya nke ịtụnanya Native American style na-agụnye A, K, Q, J na 10 tinyere anụ ọhịa bea, squaws, chiefs na totems. The ọhịa na ikposa ihe nnọchianya na-agụ dị ka ndị ọzọ na akara.
Hefty payouts Na a Video oghere
The Gbasaanụ akara na-akpọ Golden daashi na ọ na-enye Player ohere iji merie mgbe ha na-egwu atọ bonus atụmatụ. On ọdịda atọ ma ọ bụ karịa atọ nke ndị a na akara, na daashi wheel ga-ọdịda gị, na-enye gị ụzọ atọ bonus atụmatụ. Ebe i nwere ike-utịp na ịtụnanya ego nwa anụmanụ na-home hefty payouts.
The Three Daashi atụmatụ a n'etinye Free Daashi £ 5 Game
Na Golden Chief e a 'Cash Canyon' feature. Ebe ị ga-akpali tinyere a magburu onwe Canyon nzọ ụkwụ. The ogologo gị ụzọ, ndị ọzọ ụgwọ ọrụ ị ga-esi. The kasị elu payout na-500x gị staked uru. Rịba ama na mgbe daashi wheel ego n'anya triggered na anọ ikposa akara, ị ga-akwụ ụgwọ ihe ndị ọzọ.
The 'Totems Riches' atụmatụ a n'etinye Free Daashi £ 5 egwuregwu na-agụnye ị na-arịgo Totem okporo osisi dị ka ụgwọ ọrụ ị ga-enweta n'osisi multipliers. Họrọ ọ bụla otu n'ime atọ totem okporo osisi na ị ga-achọpụta na ọ bụla mmeri ga-akwụ gị ụgwọ karịa gara aga mmeri. Ọzọ ị ga-akwụ 500x gị ịkụ nzọ nchikota. I nwere ike imeri ihe na-adị mfe ma ọ bụrụ na ị na-jidere anọ ikposa akara, dị ka a ga-ozi kpọtara gị ihe mmezi ndụ.
Egbu, ndị Free spins feature enọ 5 free spins maka 3 ikposa na akara na 10 free spins maka 4 ikposa akara. Nke a na atụmatụ nwere ike n'ọrụ mgbe isi egwuregwu. On ọdịda otu, abụọ, atọ ma ọ bụ anọ bonus akara ga-enye otu, abụọ, anọ ma ọ bụ iri free spins kwekọrọ bonus akara.
Ndi-isi-akara ga-eme ihe dị ka obo Wild na mgbe ọ na-egosi elu, ọ ga na-agbasa na ya kacha elu nke pụtara ise-esi anwụde dịgasị. The ọnụ ọgụgụ nke paylines ga-gbanwere n'ihi na egwu na-akpọ na a ịkụ nzọ ego erughị £ 2 n'ihi na ọ bụla atụ ogho ga-amụba paylines si 10 ka 50. Ọ bụrụ na ịkụ nzọ ego bụ ihe karịrị £ 2 kwa atụ ogho na payline nọmba ga-amụba site 20 ka 100.
Site n'idebe gameplay nnọọ mfe, Mmepụta ka agbakwunyere iche iche site na nke ụfọdụ uru nwere ike emechaakwa dapụtara ke nnukwu Enwee Mmeri na Golden Chief. The RTP a oghere bụ 94.12% maka ala ịkụ nzọ ego na 98.12% maka a elu ịkụ nzọ ego. Juru na ịtụnanya atụmatụ na ibu nke fun, a n'etinye Free Daashi £ 5 bụ uru a ikpe taa.